Mpanome rano → zaridainam-panjakana • Fitaovana fanatanjahantena • klioba fanatanjahantena Warsaw
Mila dispenser rano ve ianao, mpisotro amin'ny zaridainan'ny zaridaina na toeram-panatanjahan-tena? Ny orinasa Water Point dia manolotra ireo mpamaky rano anaty tavoahangy, mpisotro, loharanon'ny mpitondra an'izao tontolo izao, izay mpizara manokana antsika any Polonina.
Ny kalitaon'ny rano fisotro nomen'ny rano dia arahi-maso any Polonina amin'ny alàlan'ny tobim-pahadiovana sy epidemiological, izay manome antoka fa ny rano manakatra ireo mpandray azy dia mety hanjary.
Manaiky ny manam-pahaizana fa afaka mirehareha amin'ny rano paompy matsiro sy mahasalama ny tanàna maro ao Polonina. Water madio izy io, tsy misy otrikaretina mikraoba ary mintsy kely dia afaka misotro azy tsy amin-tahotra.
Ity ny karazan-drano mikoriana avy amin'ny loharano sy loharano misotro rano, izay tonga lafatra amin'ny toerana be olona, ​​toy ny zaridaina, kianja, zaridaina, kianja filalaovana ary tora-pasika.
Ny fanomezana fidirana rano fisotro madio any an-tanàn-dehibe, tokony hojerena manokana ny hoe ny faritra maintso, i.e. ny zaridaina tanàna, kianja filalaovana ary ny toeram-panatanjahantena rehetra, izay misy ny fampitomboana ny asa ara-batana olona mampiasa azy ireo miteraka fitakiana rano madio. rano.
Mila rano be dia be ny ankizy sy ny tanora, indrindra mandritra ny fanazaran-tena. Araka izany, amin'ny fametrahana loharano misotro rano eo amin'ny kianja filalaovan'ny ankizy, ary koa amin'ny toeram-panatanjahan-tena, dia afaka manome rano fisotro matsiro ianao, izay ho safidy amin'ny zava-pisotro mamy tsy mahasalama.
Ny tombony fanampiny amin'ny mpisotro ivelany dia ny fanafoanana ny tavoahangy plastika ary ny famoronana fahalalahan'ny tanora-ekolojia.
Toerana fialam-boly, kianja, kianja sy trano fanaovana fanatanjahan-tena no toerana tokony hahitana ny loharano sy ny fisotroan-drano fisotroan-drano, izay tsy mahato ny hetahetanao fotsiny, fa mandava ihany koa ity sehatra ity.
Ny loharano misotro rano dia mamela ny fihoaram-pahalemena sy ny hetaheta haingana, ary ny endrika maoderina dia manasongadina ny fisehoan'ny habaka.
Zava-dehibe ny fampianarana ny ankizy mbola kely hatrany fa ny rano avy amin'ny loharano sy ny loharano misotro rano dia natao ho an'ny fisotroana fotsiny ary tsy tokony hosasana tanana ny kilalao na kilalao.
Indrindra amin'ny fahavaratra, ny vahiny rehetra mandeha amin'ny zaridainam-panjakana na ny mpandray anjara amin'ny hetsika sy ny hetsika ara-panatanjahantena atao amin'ny toeram-panatanjahantena dia hankasitraka ny zava-misy fa afaka hamono ny hetahetany amin'ny rano mamelombelona sy salama izy ireo, izay avy amin'ny dispenser na lohataona iray.
Miha-malaza hatrany ny fametrahana fitaovana manome lanja maimaim-poana sy rano madio amin'ny alàlan'ny tanàna an-tanàn-dehibe, tsy any Polonina ihany fa amin'ny firenena eoropeana maro ihany koa. Ny famonoana rano fisotro dia mora sy mora ampiasaina, ka ny zaza, ny tanora, ny lehibe sy ny antitra dia afaka mampiasa azy ireo amin'ny fotoana rehetra ilainy. Afaka misotro rano mivantana ianao, fenoy ny tavoahangy rano na lovia alika.
Tsy mila mitondra tavoahangy miaraka aminao intsony ianao satria akaiky sy akaiky ny rano mamelombelona. Ireo dispensianina koa dia manampy amin'ny fikarakarana ny tontolo voajanahary amin'ny fanesorana ny fihoaran'ny fako vita.
Ny loharano misotro rano izay napetraka eo amin'ny zaridainam-panjakana sy amin'ny toeram-panatanjahan-tena dia mihamalaza hatrany noho ny fahalalahan'ny fampiasana azy ireo sy ny fahadiovana.
5 / 5 ( 34 vato )
rano madio amin'ny valan-javaboaryrano madio ao amin'ny valan-javaboaryrano maimaimpoana amin'ny valan-javaboaryloharano eny amin'ny valan-javaboaryloharano misotro ranopitniki amin'ny valan-javaboaryzava-pisotro amin'ny valan-javaboaryzava-pisotro ao amin'ny zaridainam-panjakanarano ao amin'ny trano fanatanjahan-tenarano amin'ny valan-javaboarymisotro rano amin'ny zaridainarano ao amin'ny zaridainaloharano amin'ny zaridainan'ny zaridainarano ao amin'ny zaridaina